Lalao Wii tsara indrindra tokony hilalaovanao amin'ny taona 2020 - Lalao
Lalao Wii tsara indrindra tokony hilalaovanao amin'ny taona 2020
Nintendo Wii dia console lalao maoderina an-trano izay navoaka tamin'ny 2006. Miaraka amin'ny fanampian'ny teknolojia tsy misy tariby dia manome traikefa zava-misy virtoaly ho an'ny mpampiasa azy rehetra izy. Tamin'ny 2009, novakian'i Wii ny firaketana amerikana ho an'ny ankamaroan'ny varotra console ao anatin'ny iray volana.
Wii dia afaka manome fifaninanana henjana ho an'ny Sony PlayStation 3 sy ny Microsoft Xbox 360 noho ny paikadim-barotra. Ireo lafin-javatra roa ireo dia nahatonga ny Wii ho tonga lafatra ho an'ny fianakaviana iray manontolo, ary izany no mahatonga ny Wii ho mpitarika eo amin'ny sehatry ny console. Ny Wii console dia iray amin'ireo milina filalaovana be mpandray indrindra amin'ny tantara moderina.
Lisitry ny lalao Wii 10 ambony - malaza indrindra
Ny antony ao ambadiky ny lazan'ny Wii dia ny vidiny ambany, ny fanaraha-maso azo aleha, ary ny lalao ankamantatra marina. Wii dia mijoro marina raha ny momba ny kaody anarany'Revolisiona.'Ny diany ao amin'ny indostrian'ny console dia tsy latsaky ny revolisiona. Ny lalao Wii tsara indrindra dia feno fahatsiarovana ary manolotra traikefa manan-karena maro ho an'ireo mpilalao.
Andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo lalao Wii tsara indrindra sy ny mampiavaka azy manokana, hahatonga azy ireo ho tsara indrindra.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny lalao? Hizaha etsy ambany
Lalao Cross-Platform tsara indrindra
Super Mario Galaxy 2 dia lalao video amin'ny sehatra 2010 novokarin'i Nintendo mba hampiasaina amin'ny Wii.Ity dia tohin'ny lalao tany am-boalohany izay navoaka tamin'ny 2007. Super Mario dia iray amin'ireo lalao malaza indrindra amin'ny console Wii.
Hita amin'ny Wii tany am-boalohany sy Wii U koa izy io. Afaka mahita valiny tsy miova amin'ireo fitaovana roa ianao. Amin'ny ankapobeny dia fanandramana mahafinaritra miaraka amin'ny namana sy fianakaviana izany. Ny tantara dia mihodina manodidina an'i Mario amin'ireo ahiahiana mahazatra. Mitranga eny amin'ny habakabaka izany ary manolotra singa vaovao ho an'izao rehetra izao Mario.
Endri-javatra tsara indrindra:
Ny sandam-bola dia manana lanja bebe kokoa.
Fanamafisana bebe kokoa
Ny Legend of Zelda dia navotsotra tamin'ny faran'ny 2011. Io dia namela ny sasany amin'ireo sary tsara indrindra amin'ny rafitra satria nanasongadina fomba kanto an-tsaina. Izy io koa dia naneho ny fampiasana ny Wii MotionPlus tamim-pahakingana hanaporofoana fa tsy gimikika ny fanaraha-maso ny hetsika. Ity no lalao faha-16 amin'ny andiany Legend of Zelda.
Ny lalao dia ambony eo amin'ny mpampiasa Nintendo Wii.Afaka miaina ny lalao amin'ny fitaovana Wii U koa ianao. Io no lalao konsoly lavorary ho an'ireo mpankafy ilay andiany.
Ny fanampiana an'iDash mekanikananao azy fotsiny fa mandringana.
nampianyCrimson Loftwingnanao an'ity lalao ity ho tian'ny mpampiasa azy.
Sary mahavariana sy mahatalanjona.
3. Fahotana sy sazy: mpandimby kintana
Nisy fotoana tsy nahitan'ny Wii lalao lalao Star Fox mety. Ity lalao ity dia natolotra, ary noho ny lalao mahafinaritra, ary nahavita nameno ny banga. Izy io dia lalao shooter rail mahazatra hita amin'ny sehatra Wii rehetra. Io dia iray amin'ireo lalao Wii tsara indrindra misy eny an-tsena.
Raha manana Wii taloha mandry ianao ary mbola tsy nanandrana an'ity klasika ity dia tena mamporisika anao hividy izahay. Ity dia tohin'ny lalao Nintendo 64 mahazatra. Ny sary nohatsaraina ao amin'ny console Wii vaovao dia mahatonga azy rehetra ho mahatalanjona kokoa.
fitomboan'ny fivezivezenaizay miaraka amin'ny tetika vaovao mifehy dia manamora ny zavatra voajanahary.
Ny lalao dia misy hetsika haingana, mampientam-po izay tsy mijanona mihitsy.
Raha maniry mafy ny handondona an'i Iron Mike ianao amin'ny faramparan'ny taona 80 dia safidy tokana sisa no sisa nataonao:Mike Tyson's Punch-Out !!Izy io dia andian-tantara malaza izay hita tao amin'ny Nintendo Entertainment System. Ny fitaovana tany am-boalohany dia nalaza tamin'ny androny.
Misy lalao mitovy amin'izany ankehitriny ihany koa ho an'ny Wii. Mahatalanjona ny sary mihetsika sy ny sary. Ireo mpampiasa dia afaka manantena valiny lehibe amin'ny fividianana ity. Raha tianao ny miady amin'ny lalao, dia ho anao ny lalao Punch-Out.Ity lalao ho an'ny Wii ity dia mamerina ny gadona fialan-tsasatra sy ny punch izay nahatonga ny tany am-boalohany ho kilalao toy izany.
Ity lalao ity dia namaritra ny fitsipiky ny fikambanana mpanao ady totohondry video eran-tany.
Na eo aza ny lalao afaka telo taona monja dia mbola mpivarotra ambony indrindra ho an'ny NES izy io.
Doc Louis solontenan'ny Little Mec fa manome serivisy molotra Nintendo koa.
5. Ny tranon'ny maty: famonoana tafahoatra
House of the Dead dia andiana mandroso manodidina ny'On-lalamby' foto-kevitra lalao fitifirana. Ity lalao ity dia mifehy ho azy ny fakan-tsary sy ny hetsika, hahatonga ny mpilalao hifantoka ary hifantoka amin'ny fitifirana. Izy io dia fihodinan'ny trano malaza amin'ny andiany maty.
Hita tamin'ny konsol rehetra io fotoana io. Izy io dia misy ny Wii ho endrika anohana anao.Lalao malaza ity izay misy fangatahana goavambe. Tsara kokoa raha nanandrana azy ianao androany noho ny tantara mahafinaritra sy sary mafonja.
Lalao tany am-boalohany sy tsy manam-paharoa novolavolaina ho an'ny olon-dehibe mpihaino
Ny statistika amin'ny antsipiriany amin'ny faran'ny dingana rehetra dia mampitombo ny fifaninanana
6. Tantara ao amin'ny zohy
Ny tantara ao amin'ny lava-bato dia mitondra anao amin'ny diany tsy misy tadidinao hoe iza ianao na avy aiza avy eo amin'ny fiaraha-monina. Mifoha ao anaty lava-bato maizina ianao ary mahita ny tenanao ao amin'ny tanàna antsoina hoe Mimiga.
Ny iraka nataonao dia ny famonjena ny olona ao amin'ny tanàna Mimiga. Izy io dia platformer 2D, izay lalao viral ao anatin'ny fiarahamonina Wii. Tian'ny Gamers izany noho ny fitovizany amin'ny kilasika toa an'i Castlevania sy Amaya.
Mahazo manararaotra mifanerasera amin'ny zavatra maromaro ireo mpilalao mba hamita ny haavony.
Ireo fitaovam-piadiana nangonina dia natsangana ho ambaratonga 3.
Ity lalao mahafinaritra ity dia nanome ny Nintendo franchise endrika vaovao farany, izay nalaza eo noho eo eo amin'ireo mpilalao. Ilay mazoto amin'ny lalao - Kirby, dia noforonina amina endrika maro sy sary mahafinaritra.
Kirby dia afaka mifanerasera amin'ireo singa manodidina ny tontolo iainana ao amin'ny lalao ary manintona kofehy izay mitarika azy hahita faritra miafina. Misy singa iray mampiahiahy satria zava-miafina maro no miseho rehefa mandroso ny lalao.
Ity lalao ity dia natsangana manokana ho an'ny mpijery tanora kokoa. Manana haavon'ny fahasarotana mifanaraka amin'izany.
Tombanana ny ho avy amin'ny lalao Wii:
Tao anatin'ny fianarana enina herinandro farany izay natao tao amin'ny tranon'ny Zokiolona SASCO. Ny valiny dia naneho fa ny filalaovana lalao Wii dia nisy fiatraikany tsara teo amin'ny fiadanan'ireo zokiolona amin'ny ankapobeny, tsy toy ny vokatr'ireo lalao video hafa misy ankehitriny. Ny lalao Wii dia manampy amin'ny fampihenana ny olana amin'ny hatavezina amin'ny alàlan'ny fanaovana fampiharana video ho fanatanjahan-tena ary koa fanatanjahan-tena. Ireo mpikirakira tanana dia manampy amin'ny asan'ny hozatra. Ireo tombony ireo dia mampiseho fa manana sakany feno i Wii amin'ny ho avy.
Mety ho sarotra ny mahita ny lalao Wii tsara indrindra amin'ny taona 2020. Amin'ity torolàlana ity dia jerentsika ny sasany amin'ireo safidy tsy manam-paharoa misy. Manantena izahay fa afaka milalao fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny namanao sy mankafy an'ireto lohateny mahafinaritra ireto.
Inona no nitranga tamin'ny Krismasy mainty?
Iza no tsy ho anisan'ny Mighty Ducks Game Changers 2?
ny fomba fampidinana kilalao maimaim-poana
maimaim-poana ny sarimihetsika sy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra
ohatrinona ny mpianatra spotify
roblox ny fomba fanaovana lobaka
sarimihetsika feno maimaimpoana nefa tsy misoratra anarana